बन्दुकको गफ दिँदा अमेरिकी कलेजबाट नेपाली विद्यार्थी निश्काशित ! कारण यस्तो छ ( पढ्नुहोस ) – Pradeshi Online
बन्दुकको गफ दिँदा अमेरिकी कलेजबाट नेपाली विद्यार्थी निश्काशित ! कारण यस्तो छ ( पढ्नुहोस )
साथीलाई धम्क्याएको आरोपमा एक नेपाली विद्यार्थीलाई अमेरिकाको कलेजले निष्कासन गरेको छ । न्यू हृयाम्पसायर राज्यस्थित न्यू लण्डनमा रहेको कोल्बी-सोयर कलेजमा अध्ययनरत २१ वषिर्य सुप्रज्ञ रिजाल निष्कासनमा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री के पी ओलीले अस्पतालको बेडबाटै आफ्नो काम थालनी गरे , के काम गरे ?